Mareykan oo hub casri ah ka iibinaya Sucuudiga | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Mareykan oo hub casri ah ka iibinaya Sucuudiga
Mareykan oo hub casri ah ka iibinaya Sucuudiga
(SONNA)- Xukuumada Mareykanka ayaa ogolaatay in Boqortooyada Sacuudi Careebiya laga iibiyo Gantaalada loo yaqaano THAAD oo ay ku bixin doonta lacag gaaraysa 15 bilyan oo Doollar,kaasoo loogu tala galay in ay ku xoojiso awoodda difaaca dalkeeda.
Waaxda Arrimaha Dibadda ee Mareykanka oo warkan shaacisay waxay kale oo sheegtay in Gantaaladan ay xoojin doonaan ammaanka Sacuudiga iyo dalalka kale ee gacanka xilli ay sii kordhayso khatarta uga imanaaysa dibadda.
Gantaaladan loo yaqaano Thaad ayaa Mareykanka waxa ay horey u geeyeen Kuuriyada Koonfureed si ay isaga difaacaan haddi Kuuriyada Waqooyi ay weerar soo qaado.
Waxa ay Gantaalada Thaad ay awood u leeyihiin in ay soo ridaan gantaalada riddada dhexe iyo kuwa Riddada dheer.,Waxa ay ka hortagi karaan gantaalada ku socda xawaaraha dheer, wuxuuna gaari karaa 2000 km.
Wuxay kaloo Gantaalada uu Mareykanku ka iibinayo Sacuudiga ay ka sameysan yihiiin qalb Raadaar ah oo horumarsan.
Previous articleHowlgallo amni xaqiijin ah oo laga fuliyay Degmada Buur-hakaba
Next articleXisaabiyaha Guud ee Qaranka oo xilka la wareegtay.+(SAWIRRO)